Wepu onye na - ejere ya ozi site na mkpọchi ihuenyo | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi ewepu aha onye ọrụ site na mkpọchi ihuenyo na Android Lollipop
N'ezie nke ahụ ụfọdụ n'ime gị na-eche ihe ọ dị mkpa ka ị ga-ahụ aha onye ọrụ ụbọchị niile mgbe ị gbanye ihuenyo nke ekwentị gị. You maraworị onye na-ahụ maka ọrụ gị na akwụkwọ ọnụahịa ndị ahụ na-abata kwa ọnwa n'ihi ya ọ dịghị mkpa ka anyị nwee aha ahụ n'ebe ahụ na mkpọchi mkpọchi.
Na gam akporo Lollipop, ma ọ dịkarịa ala ọ na-egosi na ihuenyo a, ya mere obere nkuzi a ga - enyere gị aka wepu aha onye ọrụ ma si otú ahụ nwere na Cleaner na zuru okè mkpọchi maka mkpa ndị ọzọ, ma ọ bụ gịnị mere, ọ dịghị.
1 Etu esi ewepu aha onye ọrụ na ihuenyo mkpọchi
1.1 Nzọụkwụ mbụ
1.2 Nke abụọ
Etu esi ewepu aha onye ọrụ na ihuenyo mkpọchi
Obere nkuzi a bu emere maka ngwaọrụ nwere mgbọrọgwụ ROOT dịka anyị enweghị ike ịwụnye modulu Xposer zuru oke iji wepu aha onye ọrụ site na mkpọchi ihuenyo.
Un Ngwaọrụ gam akporo na mgbọrọgwụ
A na-etinye Xposer Framework maka gam akporo 5.0
Gbanye "Amaghi isi mmalite" site na Ntọala> Nche
Anyị na-aga ịrụ nzọụkwụ nke wụnye "Hide Carrier Label" module si onye nrụpụta Nadeem Sultan. Anyị na-ebudata ya na njikọ a. Ozugbo echichi ahụ zuru ezu ị ga-ahụrịrị na modul ahụ na-arụ ọrụ.
Ozugbo m na-arụ ọrụ i nwere ike na-aga site na mkpọchi ihuenyo iji nyochaa na ọ na-okụrede aha onye ọrụ jiri usoro Xposed a. Okwesiri ighota na modul a ekwesighi igbanwe ihe obula. N'ihe atụ nke etu etu modul a si arụ ọrụ, ị ga - ahụ etu aha “Enweghị kaadị SIM - Oku eyighị eyi naanị” efuola, nke pụtara na Xposed nọ n'ọrụ.
Otu n'ime nkọwa ndị ahụ na-enweghị isi na ụfọdụ ndị ọrụ ọ nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu ịnweta aha onye ọrụ ha ụbọchị niile dịka akụkụ nke mgbasa ozi n'efu anyị na-enye ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu esi ewepu aha onye ọrụ site na mkpọchi ihuenyo na Android Lollipop
Abali ọma, enwere m zte agụba a410 na lollipop 5.1 ma achọrọ m iwepu njirimara ndị ọrụ mgbe m gbanye ekwentị, na nke a digitel venezuela, ewepụlarị m bootanimation na ngwa ndị onye ọrụ wụnye, anaghị m ahụ ụzọ iji wepu mgbasa ozi a na-akpasu iwe, ị nwere ike inyere m aka ???
Zaghachi ka jaime triana
Ise ọzọ ka WhatsApp olu oku
Samsung na-akwụsị mmelite gam akporo 5.0 nke Galaxy S4 ya na S5 ya